I-Semalt: I-Web Scrapers Ye-Free Yezinhlelo Zokuhlela
Uma ngabe udinga ukudonsa idatha kusuka kumasayithi wesithathu, amathuba okukhetha ama-APIs ezisemthethweni. Kodwa-ke, kunamanye ama-web scrapers e-intanethi angenza umsebenzi wakho ube lula, futhi njengomhleli noma unjiniyela, ungasusa idatha kusuka kumasayithi amaningi njengoba ufuna.
1 - free create your home design. Idatha Scraper:
Idatha Scraper uhlelo olulula kodwa olunamandla nolusizo lwe-web scraping. Akugcini nje ukulimaza izithombe nemibhalo kodwa futhi kuhlolisisa uhlu namatafula kusuka kumakhasi owodwa noma amaningi. Khona-ke, leli thuluzi liguqula noma londoloza idatha ekhishwe kumafayela we-XLS ne-CSV. It mahhala izindleko futhi iza nezici eziningi. Noma kunjalo, abahleli nabathuthukisi bezobuchwepheshe kumele basebenzise inguqulo yaso ekhokhwayo ehambisana nezici eziningi futhi ayidingi noma iyiphi ikhodi.
2. I-Web Scraper:
I-Web Scraper isandiso se-Chrome esingahlanganiswa kalula ne-Google Chrome isiphequluli sakho. Ivumela abasebenzisi ukudala izindawo zokuhlala ukuze babonise indlela isayithi okufanele ihambisane ngayo nokuthi uhlobo luni oludinga ukuluhlakaza. Abahleli nabathuthukisi badinga nje ukungeza lesi sandiso ku-Chrome yabo bese baqala ukukhipha idatha.
Uma kuziwa emkhatsini wedatha, abathuthukisi nabahlelo kumele babhekane nezinselele eziningi. Nokho, nge-Scraper, umsebenzi wabo ungenziwa ngokushesha futhi kulula kunanini ngaphambili. Lokhu kulula ukusebenzisa i-web scraper engakwazi ukukhipha idatha ngesimo samatafula, izithombe, izinhlu, nemibhalo. Udinga nje uchofoze inkinobho ye-Scrape kusuka kwimenyu yayo yesokudla phezulu bese uvumela leli thuluzi lenze umsebenzi walo.
6. Isibuko sokubuka:
Isibuko esibukwayo sihle kulabo abafuna ukukhipha izithombe namafayela evidiyo. Kuyinto ye-web scraper yamahhala ezayo ne-interface elula-nendawo yokuchofoza futhi isetshenziselwa ukuqoqa idatha efanelekile kwi-intanethi. Uzothola idatha yesikhathi sangempela kusuka kumakhasi oyifunayo uphinde uyithumele ngefomu le-XML, i-CSV, i-SQL, ne-JSON.
7. I-Hub yokukhwabanisa:
Lesi sikhulu samahhala sinezinqwaba zezici futhi kufanelekile kuma-Windows, Linux nezinye izinhlelo zokusebenza. Izokuvumela ukuthi uhlakaze idatha kusuka kwamakhasi angaphezu kwamashumi amahlanu wewebhu. Noma kunjalo, inguqulo ye-premium ingakwazi ukufaka amakhasi angaphezu kuka-130,000 wewebhu ngaphandle kokukhishwa.
8. I-Dexi.io: ​​
Eyaziwa nangokuthi i-CloudScrape, i-Dexi.io i-web scraper evamile isiphequluli esiphezulu. Ivumela abasebenzisi ukuthi babambe idatha futhi banikeze izinhlobo ezintathu zama robot ukuze umsebenzi uwenze kalula. Kungenza imisebenzi ehlobene nokukhahla, ukukhipha kanye nokudonsa idatha.
I-Webhose.io iyinhlangano yamahhala ehlinzeka nge-server ye-proxy engaziwa futhi iyayenza umsebenzi ngokushesha ngangokunokwenzeka. Akugcini nje kuphela ukukhipha amasayithi akho kodwa futhi nedatha yomlando; kusho ukuthi ngeke kudingeke ukhathazeke ngokulahlekelwa ulwazi oluwusizo ngoba luzogcinwa kufolda yalo yokugcina.